सीमाबचाऊ अभियानबाट नेपालको नक्शासार्वजनिक, राष्ट्रसंघसम्म पुर्याउने – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
सीमाबचाऊ अभियानबाट नेपालको नक्शासार्वजनिक, राष्ट्रसंघसम्म पुर्याउने
काठमाडौं, ८ मंसिर । नागरिक समाजकातर्फबाट गठन गरिएको सीमाबचाऊअभियानले लिमपियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेटिएको नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमाआजपत्रकार सम्मेलन गरी अभियानको नक्सा समितिले नेपालको राजनीतिकनक्शातयार गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
नक्शातयार गरेको विधिबारे जानकारी दिदै अभियानकाप्रा. डा. नरेन्द्र राजखनालले विज्ञका हिसाबले नदीको रखांकनगरिएको बताए । उनले भने, डिजीटल एलिभेसनमोडेलबाट रेखांकन गरेकाहौं । यही विधिबाट रेखांकनगरिएको जानकारी समेत दिए । नक्शाबनाउँदा कालीनदीको मुहानबारे प्रष्ट पारिएको बताए ।
सीमाबचाऊअभियानको नक्शा समितिका विज्ञ कोमलचन्द्र बरालले लिम्पियाधुरालाई पश्चिमी नेपालको सीमामानेर नक्शातयार पारिएकाले यसलाई विश्वव्यापीबनाउने जानकारी दिए । उनले नक्शातयार पारिएको विधि समेत उल्लेख गरे ।
नागरिक अगुवातथा सीमाबचाऊ अभियानका संयोजक भैरव रिसालले नेपालको नक्शाबारे घर घरमाचर्चा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, हामीले अरुको जमिननलिने रहाम्रो जमिनअलिकतिपनि नछोड्ने मूल सिद्धान्त हो । सार्वजनिकगरिएको नक्शासुगौली सन्धीअनुसारको भएको बताए । भारततर्फबाट नेपालीभूभागमागोलमालभएको कारण नयाँनक्सासार्वजनिकगर्नुपरेको उनको भनाई थियो ।
नापीविभागकापूर्व महानिर्देशक पुण्य दाहालले नक्शा सार्वजनिक गरेकोमाअभियानलाई धन्यवाददिए । उनले कालीनदीको मुहानबारे प्रमाण रहेको भन्दै आफूहरुले पनिविगतमायसमाकाम गरेको सुनाए । उनले भने, हामीले गर्नुपर्नेकामतपाईंहरुले गर्नुभएकोमा धेरुै धन्यवाद छ ।
पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतले निकालेको नक्सालाई काउन्टर गननक्सा सार्वजनिकगर्नुपर्नेमागरिएकोमाखुशीव्यक्त गरे । उनले भने,भारतको नयाँनक्सालाई हामीले मिलेर प्रतिरोध गर्न आवश्यक ।
पूर्व सचिवतथाअभियानकर्ता डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलले तयार पारिएको नक्शा नेपाल सरकारसम्म पुर्याउने जानकारी दिए । नक्शातयार भएकाले सबै क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्नेमाजोड दिए । संयुक्तराष्ट्रसंघसम्म नक्शा पुर्याउनेबारे विचार गरिएको उनको भनाई थियो ।
नागरिक अगुवातथा सीमाबचाऊअभियानका संयोजक भैरव रिसालले नेपालको नक्शाबारे घर घरमाचर्चा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, हामीले अरुको जमिननलिने रहाम्रो जमिनअलिकतिपनि नछोड्ने मूल सिद्धान्त हो । सार्वजनिकगरिएको नक्शासुगौली सन्धीअनुसारको भएको बताए । भारततर्फबाट नेपालीभूभागमागोलमालभएको कारण नयाँनक्सासार्वजनिकगर्नुपरेको उनको भनाई थियो ।
Digital KhabarMapsNepalPoliticesReporers NepalReporters Club